MarketingPilot: Microsoft Dynamics CRM Njikọ Njikọ Njikọ | Martech Zone
Microsoft Dynamics CRM na Pzụ ahịa nye gị nghọta ịchọrọ iji ghọta ndị ahịa gị nke ọma. Na omume ike na ahia nchịkọta, ị nwere ike ịchọta ndị ahịa gị nke ọma ma kewaa ha, ghọta ihe ha nwere mmasị na ya, wee jiri ozi ziri ezi tinye ha na oge kwesịrị ekwesị. Microsoft Dynamics CRM na MarketingPilot na-anapụta akpaaka azụmaahịa ụlọ ọrụ na njikwa mkpọsa multichannel.
Njirimara nke MarketingPilot
Njikọ ahia jikọtara ọnụ - Jikwaa ma hazie ọrụ ịre ahịa gị yana ngwa njikwa dị ike, na njedebe na-akwado iji nyere ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ aka ịhazi, gbue ma soro ahịa ha nke ọma.
Njikwa ihe omuma ahia - Mee ka ndị otu gị na-emekọ ihe ọnụ na ijide n'aka na akụ ndị dị na ọrụ kwesịrị ekwesị.
Mmefu ego - Inweta ezigbo oge nghọta n'ime mkpọsa emefu na ahịa Amawaputala, na amụma ọzọ n'ụzọ ziri ezi.
Njikwa mkpọsa - Mmezi ka mma na ire ahịa ma melite arụmọrụ site na iji igwe na-arụ ọrụ ọtụtụ ọwa.
Mgbasa ozi & atụmatụ - Mee atụmatụ, tulee, mekwaa ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-azụta ngwa ngwa karịa oge ọ bụla.
Ngwọta ụlọ ọrụ - Ezubere maka ọrụ zuru oke, ịzụta mgbasa ozi, ihe okike, mgbasa ozi, ihe omume, ahụmịhe, PR na ụlọ ọrụ na-aza azịza, MarketingPilot na-eme ka ọrụ dịkwuo mma ma melite arụpụtaghị na uru karịa usoro njikwa ụlọ ọrụ ọdịnala.
Tags: ere ahịamicrosoftMicrosoft MicrosoftIhe omimi Microsoftmicrosoft Ọnọdụ crm